Myanmar Gays Heaven: iremember528
For fun , contact me, iremember528@gmail.com
Anonymous May 7, 2014 at 12:44 AM
chanmyae thaw May 7, 2014 at 3:07 PM
အက်ဒမင်ရေ သူ့အကောင့်လေးပေးပါလား .. သူ့ကိုကြိုက်လို့ပါ
Anonymous May 7, 2014 at 6:30 PM
Kyaw Swar Thiha May 9, 2014 at 4:11 AM
Anonymous May 13, 2014 at 8:51 PM
Hm မပာုတ်၇င် မအက်ပါနဲ့ဗျာ irememberက ပျော် တတ် ပါတယ် စ တတ် တယ် စိတ် မဆိုးပါနဲ့ hm ဆိုတဲ့ကောင့် နဲ့စကား ပြော ချင် လ်ု့ ဘ့ာတို့လနဲ့ ။ကျ နော် စိတ် မဆိုးတတ်ပါ။ ဒီပို့စ် တင် ပီးကတဲက ဆဲခံ၇တာ ၅ခါ။ တချို့ ဘလ်ုင်းကြီး ၀င် ခွပ် တယ်။မင်း ဖင် ခံမှာလား။လိုးချင် တယ်။စသဖြင့် ပေါ့ဗျာ။ဘလော့ဂနဲ့ သူငယ် ချင်းများ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
ver from sbo, 442073213
Anonymous May 27, 2014 at 7:58 PM
I contacted you, but you made me fool.
Anonymous May 27, 2014 at 2:34 AM
Top ပါ bot တ​ယေက်​နဲ့အတည်​တွဲချင်​တယ်​ အသက်​က၂၃ရွှယ်​တူကိုပိုကြိုက်​တယ်​။မဝရဘူး။ရဲ​လေးထက်​အသက်​တအားမကြီးရဘူး။ရုပ်​ရည်​အသင့်​တင့်​ရှိရမယ်​။ရဲ​လေးလည်းပုံမှန်​ပဲ။မန်းေ​လေးကဆိုအဆင်​​ပြေတယ်​ စိတ်​ဝင်​စားရင်​ဆက်​သွယ်​ပါ gmailက yelay828@gmail.com ပါ အဆင်​​ပြေရင်​viber မှာ​ပြောမယ်​
Anonymous July 21, 2014 at 5:39 PM
johnmoon80 May 27, 2014 at 3:53 PM
Anonymous May 27, 2014 at 8:01 PM
I comfirmed your request.
Anonymous May 27, 2014 at 9:59 PM
call me aung lay
this is my real ph no 09420266286 ok?
yankorlatt June 1, 2014 at 3:56 AM
ဟေ့ ငါ့ကိုမှတ်မိလား viber မှာတွေ့သေးတယ်လေ
09 250 791873 ကို add လိုက်
Anonymous July 7, 2014 at 12:21 AM
iremember528@gmail.com နဲ့ ဖေ့ ဘုတ် အ ကောင့်ဖွင့်ထားတယ်။you are wellcome all homo boy
Kyaw Thu Soe December 22, 2015 at 12:29 AM
Anonymous August 17, 2014 at 5:05 PM
မန်းလေးက လီးကြီးပြီး အကြာဆုံးလိုးပေးနိုင်သူကို တစ်သိန်းပေးမယ်
aung aunggyi October 8, 2014 at 10:48 AM
Anonymous October 11, 2014 at 5:37 AM
လိုးချင်တယ်နေပြည်တော်ကပါ09425301542 TOP ပါလီးကြီးတယ်ခံချင်ရင်ဆက်သွယ်ပါviberမှ hi လိုက်ပါ
Anonymous August 22, 2014 at 11:47 PM
ဖုံးနံပါတ်ပေးပါ လမ်းစရိတ်ပေးရင် လိုက်လိုးပေးမယ် လုံးဝကြာစေရမယ် မခံ
နိင်မှရပ်ပေးမယ် ရန်ကုန်ကပါ လီးအရှည်၆
လက်မ အသက် ၄၀ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ ဂ
Anonymous August 23, 2014 at 5:02 PM
ကျွန်​​တော်​လည်းစိတ်​၀င်​စားတယ်​ တကယ်​လိုး​ပေးနိုင်​ရင်​ ph no အရင်​​ပေးပါ အားလုံးတာဝန်​ယူမယ်​ mdy ကပါဘဲ
Anonymous September 10, 2014 at 3:50 AM
ညီ ဖုန်းပေးပါ အ ခုခေါ်မယ်
ရန်​ကုန်​က ၄၀ အကိုကြီး လိုးတာ ခံချင်​တယ်​ ဖုန်းno ​ပေးပါ viber က ဆက်​သွယ်​မယ်​.
So interest 09402556578
Anonymous November 10, 2014 at 9:13 AM
ရန်​ကုန်​ကအကိုကြီးဖုန်းလား 402556578 က
Anonymous September 9, 2014 at 2:54 AM
Anonymous September 24, 2014 at 4:07 PM
၁လ ခေါ်အိပ်နိုင် သည်
call meနေရာမရှိရင် မဆက်ရပါ
Anonymous September 24, 2014 at 4:08 PM
Anonymous January 29, 2015 at 2:02 PM
27.1.15 ည7pm ကတည်းက ၂၅၀၇၅၈၆၀၈ကပျောက်သွားပါတယ်
Anonymous October 21, 2014 at 2:26 AM
top ပါ npt ကပါလူသိမခံချင်ပါတိုးတိုးတိတ်တိတ်လိုးချင်ပါတယ် 09425301542viber မှhiပါ
Anonymous October 24, 2014 at 10:25 AM
Anonymous November 3, 2014 at 1:17 PM
Anonymous October 24, 2014 at 6:39 PM
Anonymous November 21, 2014 at 8:00 AM
09974152101 Top ခံချင်ရင်ဆက်သွယ်ပါ နေပြည်တော်
adiba akter November 18, 2014 at 10:05 AM
Aung Lwin Oo December 1, 2014 at 12:07 AM
လီးစုပ်​ဖင်​ခံချင်​ပါတယ်​ အသက်​ကြီးပြီး၄၀​ကျော်​ ၅၀​ကျော်​ အန်​ကယ်​​တွေပိုဦးစား​ပေးမယ်​ aunglwin.alo@gmail.com
naymin soe December 1, 2014 at 11:52 PM
aungkominthu aung December 6, 2014 at 11:36 AM
Anonymous December 7, 2014 at 7:57 AM
Sex ထက် love ကို ပိုပြီးအလိုရှိပါတယ်..ကျတော်ကမနွဲ့တော့ အပြင်မှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ နေချင်တယ်..လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဆဒ္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ ချစ်ချင်တယ်..ကျနော်ကရန်ကုန်ကပါ Top အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ အတည်သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်...ဘယ်လိုရှာရမလဲ..ရုပ်ရည်ထက် ယျောကျားဆန်ရင်ရပါတယ်..အသက်က 25နှစ်ပါ ရန်ကုန် အုတ်ကျင်းမှာနေပါတယ်..
Anonymous December 12, 2014 at 8:15 PM
အုတ်ကျင်းက ညီ မင်း ph.no ပေး viber ကနေဆက်သွယ်မယ် အဆင်ပြေရင်တွဲမယ်ကွာ ok
Zin Kowin May 25, 2015 at 10:51 PM
Anonymous December 22, 2014 at 8:40 PM
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:15 PM
ဖင် ခံချင်တယ် sexထက် love အဓိက အပြင်မှာ ညီကို တွေပေ့ လှည်းတနိးမှာ နေတယါ၀၉၃၆၀၇၃၂၉၄
crazy man March 12, 2015 at 8:37 AM
အသက် =၁၉ နှစ်ပါ
ခပ်. ကြမ်းကြမ်း လိုးတာကြိုက်သည်
Gtalk ကို အပ်လိုက်ပါ
၂။ အသက် ၃၀ နှစ်ထက်မကျော်ရပါ
( အရမ်းချောနေရင်.အတည်တွဲ. ရန်ဖြစ်လာနိုင်သည်)
မှတ်ချက်။. ။.ထို အချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါက
ရုပ်ရည်ကိုအာမ ခံ သည်
အချစ်စစ်ကို လိုသော အကိုချစ်သူ တစ်ယောက်နဲ့ဆုံချင်ပါတယ်
htay Ye'htoo April 30, 2015 at 8:12 AM
Ye Lin May 8, 2015 at 3:30 AM
Anonymous May 12, 2015 at 4:01 AM
အချစ်စစ်ကိုလိုလားသောညီအကိုများနဲ့စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတွေ့ အကြုံများ sex
အတွေ့ အကြုံများ ဂေးလောကအကြောင်း စကားဖလှယ်ချင်တယ်ဆိုရင် viberမှာ hi ပါ
ကျနော်နဲ့sexလုပ်ချင်ရင် ပုံအစစ်ပြပါ ပုံတွေ့
မှစဉ်းစားမည် ခုထိ sex အဖော်ရှာမရသေးပါ
Anonymous May 12, 2015 at 4:10 AM
မှတ်ချက် ဖင်မခံ လီးမစုပ်ပါ ဥပဓိရုပ် ဘော်ဒီ
လီး အသားရည် ဆက်ဆံရေး အာလုံးok ပါ
စိတ်ဝင်စားရင်call ပါ 09792000874
Zin Kowin May 25, 2015 at 10:53 PM
Naing Tun June 27, 2015 at 5:10 PM
photo owner ကိုမှုပေးမယ်
Anonymous August 6, 2015 at 6:32 PM
စုပ်​လည်​စုပ်​​ပေးမယ်​ဖင်​လည်​ခံမယ်​ပြီး​တော့လရည်​လည်​​သောက်​fri လီးကိုတညလုံးစုပ်​​ပေးမယ်​ကြိုက်​လားကြိုက်​ရင်​ ph 09428465435
Anonymous October 3, 2015 at 7:56 PM
ngel lay November 16, 2015 at 8:43 AM
Anonymous February 18, 2016 at 12:56 AM
Cristo Alex ပါ ခင် ဗျ
အက်ဒမင် ဒီပုံ ပြန် ဖျက် ပေးပါအုံး
change username July 7, 2016 at 7:31 PM
kyalsin moe July 28, 2016 at 8:41 PM
Anonymous September 16, 2016 at 9:07 AM
ရန်ကုန် bot phပေးလေ